Saturnino Calleja, nyaya dzake uye nezvimwe | News Literature
Saturnino Calleja, nyaya dzake nezvimwe
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhoroondo yezvinyorwa, Vechidiki Mabhuku
Mufananidzo webutiro: nyaya dzeCalleja dzababa vangu namainini vangu.
Saturnino calleja Ndiyo imwe yeaya manhamba anozivikanwa kwazvo sekusvibiswa nekufamba kwenguva. Munyori, mupepeti uye mudzidzisi, muunganidzwa wake wakakura wezvinyorwa zvevana wakamutsa kutaura kunozivikanwa "Iva nenyaya yakawanda kupfuura Calleja", iyo inogona kutorasika nekuda kwekusaziva. Izvi a kudzokorora kuhupenyu hwake nebasa.
Saturnino calleja Fernandez akaberekerwa muBurgos muna 1853 uye ari Referrer zvakakosha muzvinyorwa zvevana nevechidiki, kudzidzisa uye kuverenga kukurudzira munguva yake.
En 1876 Fernando Calleja Santos, baba vake, vanovhura chitoro chemabhuku uye bhizinesi rekubhainisa mabhuku iro richazove reEditorial Calleja, iro rakashandura chiitiko chekutsikisa. In its more than 80 makore emakore, yakaburitsa zviuru zvemazita nevanyori veSpanish nevekunze zvevana nevakuru.
Saturnino calleja zvakare akagadzira uye akatungamira magazini Mufananidzo weSpain uye National Association of Spanish Vadzidzisi uye akaronga iyo National Assembly yeVadzidzisi.
Yakanga isiri kusvika 1884 paakatanga kutsikisa tales zvaizoita kuti ave nemukurumbira. Asati ambotarisa Mabhuku ekuchikoro Chemhondoro nzira dzekuverenga, geometries, geographies kana nyaya kubva kuSpain, makatekisimu, maenisaikoropidhiya, mabhuku echivanhu, mabhuku echinyorwa chealfabheti, akagadzirwa nepfungwa yekudzidzisa kuda kutamba kana, zvirinani, kufara.
Nyaya dzacho dzaive dzekuwedzera pfungwa iyoyo. Akaburitsa akawanda mumiunganidzwa akasiyana se Zvitsva zvakaunganidzwa zvenyaya (ngano, yakanaka ...), Recreation library, Raibhurari yechikoro chekuvaraidza, raibhurari yevana ine Illustrated, Perla Library. Mavari makabuda nyaya dzemhando dzose, kusanganisira vanyori vakaita saSalgari, Poe, Collodi kana nganonyorwa dzemubhaibheri.
Chido kuziva chaive chekuti zvimiro yenyaya imwe neimwe, dzaivewo itsva, kubva zvavakanga vari diki uye aigona kuunganidzwa sezvinamira, mukuwedzera pakuchengeta kana kutora chero kupi zvako. Imwe neimwe yakanga yakaita masendimita maviri paupamhi uye masendimita manomwe pakukwirira.
Kuwedzera kwaive kwakadarowo vaikoshesa mifananidzo sevashoma uye haana kuzeza kuva nevanyori vaizivikanwa zvikuru venguva iyoyo, avo basa ravo rakanga rakangwarira zvikuru. Pashure porufu rwake, muparidzi wacho akanga adaro mazita akaita sePenagos kana Tono.
Uyewo, nyaya dzakagadziridzwa nevanyori saHans Christian Andersen kana hama Grimm woisa kubata kwechivanhu neavo yekupedzisira tsika saka zvakajairwa iye akashoropodzwawo nekupindura. Classic mitsara yakadai se "uye Vaifara zvavoHavana kundipa zvimwe nekuti vaisada ».
CheroS e mazita asingaverengeki Ndizvo: Amai vokurera, Rwendo rweThumbelina, Venturita, Mutengesi weVenice, Paco I the napias, The silkworms, The gold ounce, The miller’s daughter, From urchin to senator, Giant, shumba and gava kana Chitsuwa cheJauja.
Calleja ndiye akatanga kuburitsa makuru ekutenderera editions, kuwana mutengo wakaderera uye nemitengo yemabhajeti ese.
Muna 1899 akabudisa zvinopfuura 3 mamiriyoni mabhuku yemazita anoda kusvika 900 emisoro yakasiyana-siyana, kwete nyaya chete, dzakanga dziri pasi pehafu. Akatsikisawo mabasa echitendero, maduramazwi uye mabhuku evakuru, semuunganidzwa wemabhuku ezvokurapa ane mukurumbira panguva iyoyo. Uye panguva iyo 60% yevanhu vakanga vasingagoni kuverenga nekunyora, chido chake chezvinyorwa uye zvekudzidzisa zvakamuita kuti ade kuparadzira tsika kutanga nechikoro. Yakarongedzwa saizvozvo mabhuku ezvidzidzo uye edzidziso kuvadzidzisi avo kunyange akapa kuzvikoro zvemumisha ne mari shoma shoma.
Akagadzirawo yekutanga edition ye Platero neni (Juan Ramón Jiménez akashanda paimba inotsikisa) uye akaburitsa akati wandei The Quixote, pakati pavo, vamwe vanoda kuziva semumwe ane bepa repingi kana imwe microscopic.
Uye kupedza, Aiva piyona mukusimudzira nekuparadzira mabhuku ake. Yaive nenhume dzinosvika gumi nesere pakati peAmerica nePhilippine, uye yaive imwe yekutanga zvakare mukati sanganisira maonero mumabhuku emabhuku ake, chimwe chinhu chinozivikanwa navose nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Saturnino Calleja, nyaya dzake nezvimwe
Emily Dickinson: nhetembo